1.what faa'iido alaabta?
NK kurka CNC lathes automatic New (CNC isku dayaya) qaabeynta caddaymaha more of motor iyo synchronous qoqobada design guide darafta, xoog taageeraya kartaa artifacts, wanaajiyo baaraandegidda rigidity, loo hubiyo saxnimada machining iyo celi sax, Qalab mishiinka lagu qalabeeyey qalab awood dhamaadka codbixineed oo dib.
Qalabka mashiinka noocan oo kale ah waa in ay leeyihiin sifooyinka ugu muhiimsan ee soo socda:
1. awoodda axdi qarameedka Duufaan Xoog, waayo, fur lafta, xir, dixirigoodu, xir qaybo nooca, waxaa lagama maarmaan ah si loo farsameeyo-sax sare jeexdin aarayo, iyo roughness dusha of baahida jeexdin muquuninta ah si ay u gaaraan ra0.8mm.
U baahan tahay hab mooshin qalab mashiinka, saxnimada sare oo wanaagsan thread xasiloonida firfircoon SX325 CNC tag oo dhan iyada oo qayb ka mid ah lateral firfircoon ee ku dar qalab axdi qarameedka dabaysha cirwareenta ah, qalab transverse firfircoon iyada oo wareeg drive cutterhead magaabay wiil daawaha adag-xawaaraha sare ah (ugu weyn), mashiinka dunmiiqa qalab artifact drive wareeg gaabiyaa (kaabayaal), Z1 usheeda dhexe sida ay garoonka workpiece ama keeni weheliyaan dhaqdhaqaaqa dhidibka workpiece (dhaqdhaqaaqa feed) ka, (dhaqdhaqaaqa jarida) a motion X1 axdi qarameedka dabayl cirwareen machining oolnimada sare sax sare jeexdin helical.
2. baabuur High rigidity iyo dawo la'aan awoodda processing farcan:
Muujis mid ka mid ah codsiyada in isgaarsiinta, qalabka guryaha, qalabka korontada, alaabta lagu ciyaaro iyo warshadaha kale ee gaarka u ah dhexroor badan oo qaybo iyo qaybaha, habka adag, saxnimada sare, waxay u baahan yihiin machining adag ee baabuurta, axdi qarameedka iyo leexdo, SX325 CNC tagaan baabuurta oo dhan awood, axdi qarameedka, karaan processing in size. Habka processing dhaqanka waa in la isticmaalo lathe tiro gacanta ama mashiinka axdi qarameedka, mishiinka qodista, qalabka mashiinka xarunta machining, shaqada processing nidaamka la dhamaystiro, tiro qalabka of baahida loo qabo, hufnaan wax soo saarka yar yahay, sax machining ee qaybo workpiece ka dib ku tirtirayaan labaad waa adag tahay in la damaanad qaado.
Muujis mid: isgaarsiinta, qalabka guryaha, qalabka korontada, warshadaha alaabta lagu ciyaaro qaybaha caadiga ah (32 dhexroor mm in 20 ilaa Ф Ф)
SX325 jeestay, axdi qarameedka, CNC tag oo dhan waxay leeyihiin rigidity sare oo leh hal ku tirtirayaan markii gaari karo qallafsanaan sare ee gaariga workpiece cylindrical, endface, thread, jarida jeexdin, gooyn iyo axdi qarameedka siman, qoditaanka, siyoodba iyo dhammaadka wejiga oo ka gooyay ka dib markii dhamaadka dambe ee qodista, laga faaiidaysanayo, awoodda processing farcan caajis iyo kale.
3. xoog Processing ee sax qaybo ka qodaa caato ah:
berdaha. 2 waa sax sare iyo usheeda dhexe caato ah in Haydarooliga, qaybo auto, caafimaadka, duulista, aerospace iyo warshadaha indhaha.
Jaantuska 2: Haydarooliga, qaybo auto, caafimaadka, duulista, aerospace, qaybaha caadiga ah warshadaha indhaha ee (32 dhexroor mm in 20 ilaa Ф Ф)
Waa arrin aad u adag tahay in la farsameeyo qaybaha usheeda dhexe caato ah oo cabirku dheer / dhexroor ka badan 6, iyo sax iyo oolnimada ay adag tahay in la damaanad qaado. CNC kurka lathes automatic NK New (CNC socon oo dhan), sababtoo ah technology ee processing gaar ah sida-xawaaraha sare guide synchronous baadiyaha, workpiece iyo qaybo qalab jarida mar walba oo ay taageerayaan darafta guide, si ay si fudud loo samayn karo dhexroor ka 5 ~ 32 mm, dhererka 280 mm qaybo ka qodaa caato aalladda gudahood.
2) warcelin xawaaraha / booska loop ku ansixiyeen xubno cusub sida xalinta sare uga dhisay-in shabaggeeda ama magnetic, taas oo uu leeyahay sax gacanta sare ee Rotary iyo warcelin.
3) in ay dhacdo dhismeedka dunmiiqa double, complete processing xigxiga la dhamaystiro hal mar, yaraynta tayada iyo sax ah workpiece ee ay sabab u tahay ku tirtirayaan sare, iyo hagaajinta tayada shaqo machining ah.
In ka badan 4) gacanta dhidibka multi-iyo xirid dhidibka multi-teknoolajiyada si kor loogu qaado awoodda qaybaha wax soo saarka qalab mashiinka adag iyo hufnaan machining, mashiinka gacanta qalab tiro usheeda dhexe toddoba dhidibka, tirada qalab awood iyo qalab awood isu muddo ka badan 20 .
5) qaabeynta qalabaynta hodan, garasho goolka maamulka hawlgalka mashiinka badan hal qof ayaa, marka lagu daro conveyor ku bar-dhaqameedka, qalab u qaadidda chip oo dhanba, sida / workpiece aqbalana dheer gaaban wax workpiece, qalab si toos ah ka gees ah mindi, caaqil aqoonsiga, workpiece kormeerka gujisid si toos ah iyo habka imtixaanka of dillaacin qalab ayaa lagu guuleystey in codsiga sheyga, ayaa ogaaday kordhiyo heerka of heer qalabaynta qalab mashiinka iyo qalabka la socodka.
2.how ku saabsan Pre taageero iibka?
Pre taageero iibka
1, oo lacag la'aan ah si ay u bixiyaan xal farsamo oo loogu talagalay macaamiisha. Si loo siiyo macaamiisha qorshaha ugu fiican ee processing, oo ay ku jirto doorashada qalab iyo mashiinada qaabeynta, technology processing hufan, xulashada qalab, jarida oo xuduudaheedu, qaybo ka saacadood, xulashada Chuck iyo adeegyada kale ee shaqada.
2, nidaamka oo dhan statistics, jawaabay dhibaatooyinka kala kulantay by macaamiisha ee isticmaalka qalabka, bixinta buuxda ee howlaha farsamo iyo taageero macaamiisha.
3, oo lacag la'aan ah ka shaqeeysta macaamilka si ay u bixiyaan tababar. Waxyaabaha tababarka waxaa ka mid ah hawlgalka mashiinka qalab, barnaamijyo, dayactirka iyo wixii la mid ah, si loo hubiyo isticmaalka xirfad qalabka mashiinka.
4, siin rakibo mashiin lacag la'aan ah guddiga for macaamiisha ah, oo ay injineerada cusub Ankai Corporation ee gaadiidka ee macaamiisha meel loo qoondeeyey, iyadoo la raacayo tilmaamaha gaarka saarka aqbalo cusub loogu rakibo albaabka Ankai macaamiisha si ay u bixiyaan on-site rakibaadda iyo mashiinka baaritaanka hawlgalka, si loo hubiyo in macaamiisha iibsato waxyaabaha la si toos ah loo isticmaali karaa, iyo dhameystiran adeegga xaqiijin kormeerka mashiinka.
3.how ku saabsan adeegga-iib aheyn ka dib?
> Bixi fursadaha model lathe for macaamiisha iyo hordhac ah oo ku saabsan muuqaalada iyo faa'iidooyinka ka mid ah model kasta. Talinaynaa model ugu habboona macaamiisha ka ah qorshaha ugu kharash-ool ah.
> Bixi falanqaynta technology ugu xirfadeed, xalliyaan masalooyin kuwaas oo macmiisha kala kulantay ee wax soo saarka, ha ka welwelin macaamiisha-free.When lagama maarmaan waxaana caawin doona macaamiisha in ay ku dhameysan baarka marka ay lagama maarmaan noqoto.
Waxaan ku siin doonaa rakibaadda free, adeega tababarka ka dib iibka macaamiisha si ay u maareeyaan mishiinka iyo saaray on saarka si degdeg ah.
Ka hor inta injineerada noo timaadid shirkadda adeegyada rakibaadda iyo debugging, fadlan diyaar u diyaargarowga soo socda, si injineerada our si habsami ah oo waxtar ka heli kartaa shaqo marka la yimaado.
1. Diyaari saddex waji korontada 380V iyo silig dhulka, oo u horseedi kara meel ag aalad mishiinka in lagu rakibayaa iyada oo silig 2.5mm2 ah, si injineerada our iyaga ku xidhan karto qalab mishiinka marka la yimaado, si ay ugu deeqdo amar u leh inuu qalab mishiinka.
2. Diyaari cadaadis 0.5mpa Hawada lagama maarmaanka u ah hawlgalka caadiga ah ee qalab mishiinka, xerto meel ag aalad mashiinka dhex biibiile hawada φ8.
3. Diyaari jarida saliidda (sida Ross goynta saafi ah A12 saliid) ku filan habka machining of sax lathe automatic ah.
4. Diyaari qalab mashiinka cabbeeyo saliidda (sida Ross A32).